April 2019 – MM File
မေလအတွက် သင့်ကံကြမ္မာ အခြေအနေက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ?
April 28, 2019 admin 2
မေလအတွက် သင့်ကံကြမ္မာ အခြေအနေက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ? မေလမှာ သင်က ကံကောင်းမှာလား ကံဆိုးမှာလား ဆိုတာာ တွက်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း […]
သင်က ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးတဲ့လူလဲ ?
သင်က ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးတဲ့လူလဲ ? သင်က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဆိုးတဲ့လူလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင်ကဘယ်လောက်ထိတောင် ဆုတောင်းကြမ်းတဲ့လူသားလဲ သင်က ဘယ်လိုတွေတောင် ဆုတောင်းကြမ်းတယ်ဆိုတာ ဟာသအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျကဘယျလောကျထိတောငျ ဆုတောငျးကွမျးတဲ့လူသားလဲ […]
သင့်ဖူးစာရှင်က ဘာအလုပ်လုပ်သူ ဖြစ်မလဲ
သင့်ဖူးစာရှင်က ဘာအလုပ်လုပ်သူများ ဖြစ်မလဲ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သူလဲ သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲ က ကြင်နာသူနဲ့ဘယ်လောက်ထိကိုက်ညီသလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျ့ဖူးစာရှငျက […]
သင်က ဘယ်လိုအရာတွေမှာ ထူးချွန်သူလဲ
သင်က ဘယ်လိုအရာတွေမှာ ထူးချွန်သူလဲ ကိုယ်ဘယ်အရာမှာ ထူးချွန်လဲ မသိဘူးဆိုရင်တော့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျက […]
သင့်အချစ်ဟောင်းက သင့်ဆီ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ
သင့်အချစ်ဟောင်းက သင့်ဆီ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ သင်အချစ်ဟောင်းကို မျှော်နေသေးရင်တော့ အဖြေလေး ရှာကြည့်လိုက်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျ့အခဈြဟောငျးက […]
သင့်ဘဝအောင်မြင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ လက်တွဲဖော်က ဘယ်နေ့နံဖြစ်မလဲ ?
သင့်ဘဝအောင်မြင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ လက်တွဲဖော်က ဘယ်နေ့နံဖြစ်မလဲ ? လက်ရှိရထားတဲ့ ချစ်သူကသင်နဲ့ သင့်တော်ရဲ.လား ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် ဘယ်အဆိုတော်နဲ့ သီချင်းတွဲဆိုရင် အောင်မြင်မှာလဲ ?
သင် ဘယ်အဆိုတော်နဲ့ သီချင်းတွဲဆိုရင် အောင်မြင်မှာလဲ ? သင်အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်အဆိုတော်နဲ့ လက်တွဲရမယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင်သာ ခါးပိုက်နှိုက်စားရင် ဘာပစ္စည်းတွေ အများဆုံးရမလဲ ?
သင်သာ ခါးပိုက်နှိုက်စားရင် ဘာပစ္စည်းတွေ အများဆုံးရမလဲ ? ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေဆိုရင်တော့ အလုပ်ပြောင်းသင့်ပြောင်းရမှာပဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျသာ […]
သင့် အချစ်ရေးကို ဖော်ညွှန်းနေတဲ့ သီချင်းစာသားလေးကဘာဖြစ်မလဲ
သင့် အချစ်ရေးကို ဖော်ညွှန်းနေတဲ့ သီချင်းစာသားလေးကဘာဖြစ်မလဲ အရမ်းတွေ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သီချင်းစာသားလေးက ဘာများဖြစ်နေမလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]